ngu admin nge-19- 12-16
Inyathelo nge-Airbrush ngeNyathelo liphela leli iphephabhuku labo bonke abaculi bebrashi: ukusuka ekuqaleni ukuya phambili, ukusuka kumgangatho ophantsi webrashi yomoya ukuya kumakhi ongumzekelo, umzimba kunye nomtoliki wabathengi ukuya kumzobi oyingcali. Inyathelo le-Airbrush ngeNyathelo lijolise kubo bonke abanomdla kwizihloko ze-airbrush ezisebenzayo kwaye bafuna ...
I-Harder ne-Steenbeck kutshanje batyale imali kakhulu kumaziko abo emveliso eNorderstedt, eJamani. Oomatshini abathathu abaphezulu bezobuchwepheshe be-CNC kulo nyaka khange bonyuse kakhulu amandla abo okuvelisa, kodwa bavule neendlela ezintsha zoyilo lwemveliso, kunye nophuhliso. Ngu ...
"Iindlela ezine zokutshiza" - leli ligama lengcinga entsha yokuthengisa evela kumenzi webrashi yomoya iJapan. Inkampani ithathela ingqalelo ubunzima, kodwa inyathelo eluncedo kakhulu kubaqalayo, ngesi sibonelelo sebrashi yomoya ongayichaza ukuba inobuhlobo. Injongo apha kukwenza ...
Uhlalutyo kuphuhliso lweSpirit yeMveliso yesiTayile ekhaya kunye nelinye ilizwe
Isitshizi umpu luhlobo lwezixhobo ezisebenzisa ngokukhawuleza ukukhutshwa kolwelo okanye umoya ocinezelweyo njengamandla. Ingasetyenziselwa ekwakheni ukutshiza kwaye sisixhobo esisemgangathweni kwinkqubo yokuhombisa. Ingasetyenziswa kwicandelo lokutshiza imoto, njengokutshiza ngokulungisa iimoto, iimoto ze-OEM ...